မြန်မာနိုင်ငံငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ၌လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်စိန်ခေါ်မှုများ | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	ဟိုဘဏ်မှာ Deposit တင်ထားတဲ့အတွက် ဗဟိုဘဏ်က ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအတွက် အာမခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေငွေကြေး အကျပ်အတည်းဖြစ်လာပြီး Interbank market ကတစ်ဆင့်ငွေချေးလို.မရတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဗဟိုဘဏ်က Lender of last resort အနေနဲ. ၄င်းတို.ပြိုလဲမသွားအောင် ငွေထုတ် ချေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းကြုံပြီး ဘဏ်ပျက်တဲ့အဖြစ်မျိုး ဖြစ်စရာမရှိနိုင်ပါဘူး။
၅။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေပိုများလာသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေများလာပါတယ်။ အဲဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ဗဟိုဘဏ်ကိုလည်း ၀ိုင်းပြီး အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ အဆိုးထဲကအကောင်းတစ်ခုကတော့ နိုင်ငံတကာက ဗဟိုဘဏ်တွေလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကရော လွတ်လတ်မှုရှိရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ဗဟိုဘဏ်က လွတ်လတ်မှုရှိဖို.လိုတာလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးတဲ့သူနည်းပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်တွေရဲ့ မူဝါဒဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အတော်များများက Popular မဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်နိုင်အောင် ဗဟိုဘဏ်တွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထား သင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်ပြီး နလံပြန်ထအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ဗဟိုဘဏ်တွေရဲ့ Expansionary policy ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လူကြိုက်များနိုင်ပေမဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်များပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေထိန်းချုပ်ဖို.ဆောင်ရွက်တဲ့ ဗဟိုဘဏ် တွေရဲ့ Contractionary policy တွေကို ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အချို.ဗဟိုဘဏ်တွေရဲ့ မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ Politically costly တောင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်တွေမှာ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လို.မရနိုင်အောင်လို. ဗဟိုဘဏ်တွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝအလုံးစုံလွတ်လပ်တဲ့ ဗဟိုဘဏ်ဆိုတာလည်း မရှိသေးပါဘူး။ သို.သော် လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်အတော်များများကို ပေးထားကြရပါတယ်။ အများလက်ခံနိုင်တဲ့ အများကြိုက်တဲ့ မူဝါဒတွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို. ဗဟိုဘဏ်ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်တယ်လို. ထင်ရင်တော့မှားပါလိမ့်မယ်။
၆။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ Macroeconomic environment ကိုရရှိနိုင်ဖို. ထိန်းချုပ် သင့်တာတွေကို ထိန်းချုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကတော့ ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာကို ကြိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ.အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကစားမှုတွေ မဖြစ်ပေါ်ဖို. ထိန်းချုပ်မှုတွေအခုအချိန်အထိရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ FCD လို.ခေါ်တဲ့ Foreign Currency Deposit တွေထဲမှာ ပြည်ပက၀င်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုဘဲ သိမ်းထားနိုင်ပြီး ပြည်တွင်း Account transfer နဲ.၀ယ်ယူထည့်သွင်းထားလို.မရပါဘူး။ နိုင်ငံခြားငွေကို ကြိုက်သလောက်ထည့် သိမ်းထားခွင့်လဲမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံခြားငွေနဲ.ပြည်ပကို ပေးချေစရာ Obligations တွေရှိရင် အထောက်အထားတွေတင်ပြပြီး အဲဒီပမာဏထက်ပိုတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေကို FCD ထဲမှာထားလို.မရပါဘူး။ တကယ်လို. နိုင်ငံခြားငွေနဲ.ပြည်ပကိုပေးချေစရာအတွက် အထောက်အထားမပြနိုင်ရင် ဒေါ်လာ ၅ သန်းထက်ပိုပြီးမထားရပါဘူး။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အထောက်အထားမပြနိုင်ရင် ဒေါ်လာ ၅ သိန်းထက်ပိုပြီးမထားရပါဘူး ၂၀၀၇ ခုနှစ် အထိ အထောက်အထားမပြနိုင်ရင် (တစ်ဦးချင်းဆီရဲ့ ငွေစာရင်းမှာ) ဒေါ်လာ ၅ သောင်း (ကုမ္မဏီတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ငွေစာရင်းမှာ) ဒေါ်လာ ၂ သန်းထက် ပိုပြီးထားလို.မရပါဘူး။ စတော့ဈေးကွက်တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေက ၀င်ရောက်ဈေးမကစား နိုင်အောင်လို. Non Resident FCD တွေအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
၇။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဲဒီလိုထိန်းချုပ်မှုတွေမရှိတဲ့အတွက် “အဝေး” လို.ခေါ်တဲ့ Informal Hundi transfer တွေ၊ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင်တစ်ဦးနဲ.တစ်ဦး အပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်တဲ့ Account transfer ဈေးကွက်တွေက ကြီးထွားလာပါတယ်။ အဲဒီစနစ်တွေကနေ Capital flows တွေ အရှိန်အဟုန်နဲ. ၀င်ထွက်နေတာကိုလည်းတွေ.ရပါတယ်။ အဲဒီ Capital flows တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Effects တွေကို ထိန်းနိုင်ဖို.လည်း ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာကိရိယာတွေ မစုံလင်သေးပါဘူး။ ဥပမာ မိုးရွာတဲ့အချိန် ခေါင်မိုးပေါက်နေပြီး ရေမစိုအောင်သေသေချာချာကာနိုင်တဲ့ထီးတွေမရှိသေးဘဲ ရှိတဲ့ပစ္စည်းအချို.နဲ.မိုးကာနေရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ခေါင်မိုးလုံအောင်လုပ်ဖို.ကအဓိကဆိုပေမဲ့ အဲဒီ ခေါင်မိုးပြင်ဖို.အတွက် ကိရိယာအနည်းငယ်သာရှိပြီး အိမ်သားအချို.ကလည်း ခေါင်းမိုးရဲ့အချို.နေရာ တွေကိုဖောက်ပြီး ရေခံနေတာနဲ.တူနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရေမစိုအောင်ထီးလိုက်ရှာရ၊ ပေါက်နေတဲ့ခေါင်မိုးကို ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ.ပြုပြင်ရ၊ ခေါင်မိုးဖောက်နေတဲ့အိမ်သားတွေကိုလည်းပြောလို.မရ၊ အိမ်ထဲကအခြားအိမ်သားတွေကလည်း မိုးရေစိုိုလို.၀ိုင်းဆဲနေတဲ့အခြေအနေဆိုရင် နီးစပ်မယ်လို. ထင်ပါတယ်။
၈။ ဘယ်လိုအခြေအနေဘဲရောက်နေပါစေ ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ. မိုးကိုပိုပြီးလုံအောင်ကာနိုင်ဖို.နဲ. ရှိတဲ့ ပစ္စည်းနဲ. ခေါင်မိုးကိုပြုပြင်နိုင်ဖို.ကအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Deposit auction, Reserve requirement စတဲ့ ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ. ဗဟိုဘဏ်က Contractionary monetary policy ကိုကျင့်သုံးနေပါတယ်။ မြန်မာငွေကျပ်လာတော့မှ မြန်မာငွေတန်ဖိုး အရမ်းကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Secondary bond market မရှိသေးတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ Open Market Operations (OMO) နည်းလမ်းကိုတော့ မသုံးနိုင်သေးပါဘူး။ Secondary bond market ဖြစ်လာနိုင်ဖို.အရင်ဦးဆုံး Market driven interest rates တွေရှိဖို.လိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Treasury bills တွေကို Scriptless လို.ခေါ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပုံစံပြောင်းပြီး Treasury securities auction ကိုစလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Bonds တွေကိုလည်း အီလက်ထရောနစ်ပုံစံပြောင်းဖို.လုပ်နေပါတယ်။ Treasury security auction ကနေတစ်ဆင့် သက်တမ်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ Market driven yields တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Yield curve ကိုဆွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Yield curve ရလာမှသာ Currency forward ဈေးကွက်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Currency forward ဈေးကွက်ဟာလည်း နိုင်ငံခြားငွေကြေးတည်ငြိမ်ရေးမှာ အဓိကကျပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ Repo (Repurchase Agreement) ဈေးကွက်ပေါ်လာပြီး အဲဒီ Repo တွေကတစ်ဆင့် Interbank money market တွေကျယ်ပြန်.လာကာ OMO ကိုလည်း တွင်ကျယ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အဲဒါတွေအပြင် အခြားဆောင်ရွက်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ဘဏ်စနစ်ကိုလွယ်ကူစွာသုံးစွဲနိုင်ဖို.၊ ဘဏ်စာရင်းရှိတဲ့သူတွေရော မရှိတဲ့သူတွေပါ ငွေသားတွေ အများကြီးသယ်ယူစရာမလိုဘဲ အီလက်ထရောနစ်မြန်မာကျပ်ငွေပိုက်ဆံတွေကို ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပမှာပါ အဆင်ပြေချောမွေ.စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို.၊ တရားမ၀င်ဈေးကွက်တွေနေရာမှာ လွယ်ကူ ချောမွေ.တဲ့ တရားဝင်ဈေးကွက်တွေဖြစ်လာနိုင်ဖို. စတဲ့ဆောင်ရွက်စရာတွေအများကြီးရှိနေ ပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လည်း Mobile banking စနစ်၊ Mobile payment စနစ်၊ Debit and credit card payment စနစ်၊ e-commerce စနစ် တွေကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင် Mobile banking တွေသုံးလို.ရနေပါပြီ။ မိုဘိုင်းဖုန်း ဒါမှမဟုတ် Cyber banking စနစ်ကတစ်ဆင့် ငွေလွှဲတာတွေ ဘဏ်အချို.မှာ လုပ်လို.ရနေပါပြီ။ မတူညီတဲ့ဘဏ်စာရင်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန် Cyber banking နဲ.လွှဲ နိုင်အောင်လည်း Payment switch တွေလုပ်နေပါပြီ။ Real time gross settlement system (RTGS) ကိုလည်း ဒီနှစ်ကုန်မှာစတင်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျပ်ငွေနဲ. Debit card တွေအပြင် Credit card တွေကိုပါ ထုတ်ခွင့်ပြုထားပါပြီ။ JCB, CUP, Visa, Master တွေနဲ.ချိတ်ဆက်ပြီး ကျပ်ငွေနဲ. အသုံးပြုတဲ့ Debit card တွေ Credit card တွေကို နိုင်ငံတကာမှာသုံးလို.ရနိုင်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ E-commerce စနစ်တွေကိုလည်း ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အခွန်အခအတွေကို မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ.ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပြူတာနဲ.ဘဲဖြစ်ဖြစ် e-commerce စနစ်နဲ. Electronically ပေးလို.ရနေပါပြီ။ သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန်.ခွဲမှုကော်မတီက ပထမဦးဆုံးအဖြစ် Commercial tax ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော်ကို အီလက်ထရောနစ် e-commerce စနစ်ကိုသုံးပြီး သြဂုတ်ဆန်းမှာပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၀။ မြန်မာနိုင်ငံငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံး အလုံးစုံတိုးတက်သွားနိုင်ဖို.လို. ချက်ခြင်း ဆောင်ရွက်လို.မရနိုင်သေးပေမဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်တာမှန်သမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ အညတရသဘောထား (Humble opinion) လေးကို ကြိုးစားဖော်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို သင်ကြားခဲ့ဘူးသောဆရာ၊ဆရာမများ၊ မသင်ကြားခဲ့ဘူးသော်လည်း မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာအဖြစ် ကျွန်တော်ကမှတ်သားနာယူခဲ့ရဘူးသောဆရာ၊ဆရာမများအားလုံးဟာ ကျွန်တော့်ထက်အဆပေါင်းမြောက်များစွာပိုပြီးနားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ဖော်ပြမှုမှာ အမှားများရှိလျင် ဆက်လက်သင်ကြားထောက်ပြပေးပါခင်ဗျား။
This entry was posted in Uncategorized on August 26, 2015 by koshwehtoo.	Post navigation